चुनावी गठबन्धनले लगानीकर्ता अन्यौलमा, शेयरबजार सुस्तायो | गृहपृष्ठ
Home लगानी चुनावी गठबन्धनले लगानीकर्ता अन्यौलमा, शेयरबजार सुस्तायो
on: २२ आश्विन २०७४, आईतवार १७:१९ लगानी
चुनावी गठबन्धनले लगानीकर्ता अन्यौलमा, शेयरबजार सुस्तायो
असोज २२, काठमाडौं । साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक २ दशमलव १२ प्रतिशत घटेको छ । दशैं बिदापछि दुई दिन कारोबार भएको बजारमा पहिलोदिन बजार बढे पनि दोस्रो दिन घटेर बन्द भएको थियो । आगामी निर्वाचनका लागि बामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको गठबन्धनका कारण लगानीकर्ताहरु अलमलिएको देखिन्छ ।
बाम तालमेल र पार्टी एकीकरणको विषयले लगानीकर्ताहरुमा अन्यौलता सिर्जना भएपछि बजार घटेको ब्रोकर कम्पनीहरुको भनाइ छ । ब्रोकर कम्पनीका अनुसार अहिलेको राजनीतिक अन्यौलताको अवस्थाले आगामी दिनमा कस्तो रुप लिन्छ भन्ने कुरामा लगानीकर्ताहरु अन्यौलमा परेको देखिन्छ । हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गर्दै केहि दिनमै बजारको अवस्थामा सुधार आउने ब्रोकर कम्पनीहरुको विश्वास छ ।
यस दिन कारोबार भएको दुई घण्टाको अवधीमा ४० अङ्कले बजार घटेको थियो भने अन्त्यमा ३२ दशमलव ६४ अङ्क घटेर १ हजार ५ सय १० दशमलव शून्य १ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा ४८ दशमलव ३४ प्रतिशत बढेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण २ दशमलव १२ प्रतिशत घटेर रू. १७ खर्ब ५२ अर्ब पुगेको छ ।
यस दिन १ सय ५२ कम्पनीहरुको ४ हजार ९ सय ७९ पटकको व्यापारमा ९ लाख ७२ हजार ६ सय २४ कित्ता शेयरको रू. ४१ करोड ४९ करोड बराबरको कारोबार भएको छ । सो दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स २ दशमलव १३ प्रतिशत घटेर ३ सय १६ दशमलव ९६ अङ्क पुगेको छ ।
जनता बैङ्क नेपाल लिमिटेडको प्रति कित्ता रू. २ सय ४९ मा रू. १ करोड ५२ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । साथै, गण्डकी विकास बैङ्कको संस्थापक शेयर, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क, स्वाबलम्वन विकास बैङ्क, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क, नेशनल हाईड्रोपावर कम्पनी, सिभिल बैङ्क, स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैङ्क र नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको रू. ८८ लाख देखि १ करोड ४४ लाखसम्मको शेयर कारोबार भएको छ ।
यस दिन माहुली सामुदायिक लघुवित्तको शेयर रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा करीब ४ प्रतिशत बढेको छ । यस कम्पनीले शेयरधनीहरुलाई ५० प्रतिशत वोनस शेयर र वोनसको कर प्रयोजनसहित १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव नेप्सेमा जानकारी दिएपछि यस कम्पनीको शेयर रकम बढेको हो । त्यसैगरि, रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट सेण्टरको शेयर रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा करीब १० प्रतिशत घटेको छ । यस दिन कारोबारमा आएका १ सय ५२ कम्पनीहरुमध्ये ११ कम्पनीहरुको शेयरमूल्य बढेको छ भने १ सय ३१ कम्पनीहरुको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, १० कम्पनीहरुको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ ।
कारोबारमा आएका ९ समूहहरुमध्ये सबै समूहहरुको परिसूचक घटेपछि नेप्से परिसूचक घट्न पुगेको हो । ६ समूहहरुको परिसूचक २ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । व्यापार समूहको परिसूचक ४ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत, विकास बैङ्कको २ दशमलव ७८, होटल समूहको २ दशमलव ७७, बीमा कम्पनीको २ दशमलव २८, बैङ्किङको २ दशमलव १६ प्रतिशत र जलविद्युत कम्पनीको परिसूचक २ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत घटेको छ । साथै, वित्त कम्पनीको परिसूचक १ दशमलव ९ प्रतिशत र उत्पादन तथा प्रशोधन समूह र ‘अन्य’ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ७१ प्रतिशत घटेको छ ।
यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्यूट्रल जोन अथवा ३४ दशमलव ३८ स्केलमा रहेको छ । यसले बजार सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, सो दिन नेप्सेको एडी रेशियो शून्य दशमलव शून्य ८ रहेको छ । यसले बजार वियरिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।